Guddoomiye Thaabit Cabdi oo ka hadlay lacagaha yar ee laga qaado dadka galaya beerta Nabadda – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Guddoomiye Thaabit Cabdi oo ka hadlay lacagaha yar ee laga qaado dadka galaya beerta Nabadda
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed booqasho ku tagay beerta Nabadda ee ku taalla degmada Waabari loona damaashaad taggo ayaa sheegay inay haatan wadaan qorsheyaal lagu joojinaayo lacagaha yar ee dadka shacabka laga qaado marka ay beerta gelayaan.
Wuxuu guddoomiye Thaabit sheegay in beerta Nabadda ay tahay meel loogu tala galay in bulshadda Soomaaliyeed ay damaashaad iyo nasasho yimaadaan, isagoo intaa raaciyay in ganacsatada beerta Nabadda laga doonaayo inay hakiyaan lacagaha lagu galo beerta.
“Beerta nabadda waa goob nabadeed, ma ahan in shacabka Soomaliyeed loogu qaado wax dhan 1-dollar ama 2-doollar, si ay gudaha u galaan, waa in shacabka loo ogolaadaa si sharuud la’aan ah in ay gudaha ku galaan, sidoo kale ganacsata leh xarunta beerta Nabadda ee magaalada Muqdisho, iyagana haka laabtaan go’aankaas” Sidaas waxaa yiri guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed.
Guddoomiye Thaabit ayaa sheegay in bulshada u fahmin beerta nabadda beerta ganacsiga, laakiin ay ogol yihiin in goobaha ganacsi ee ku dhexyaal kaliya ee bulshada wax ka dhex iibsata.
Dadka waaweyn iyo caruurta u dalxiis iyo damaashaad taga beerta nabadda ee magaalada Muqdisho ayaa lacago aan isku mid aheyn laga qaadaa, waxaana qofkii weyn irida beerta uu ku gala hal dollar halka caruurta yaryar laga qaado labo dollar.